नेपाली टोपी ढल्काउँदै मोदीले गरेको नेपाली उखान भाइरल : 'नदिने बजुले आइतबार पनि बार्छे' - Himali Patrika
नेपाली टोपी ढल्काउँदै मोदीले गरेको नेपाली उखान भाइरल : ‘नदिने बजुले आइतबार पनि बार्छे’
हिमाली पत्रिका २९ चैत्र २०७७, 12:16 am
काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखान टुक्कायुक्त भाषणका निम्ति प्रख्यात छन् । विपक्षीलाई उखानटुक्काले हानेर घायल बनाउने ओलीको शैली अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पछ्याएका छन् ।
भारतका नेपालीभाषी समूदायलाई प्रभावमा लिन मोदीले एक कार्यक्रममा नेपाली टोपी शिरमा ढल्काए । अनि, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेचनर्जीलाई नेपाली उखानमार्फत कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘नदिने बजुले आइतबार पनि बार्छे ।’
त्यसलाई मोदीले यसरी अथ्र्याए :
‘जसले तपाईंलाई राम्रो कुरा दिन सक्दैन, ऊ केवल बहानाको खोजी गर्छ । दिदी (बेनर्जी) लाई १० वर्ष तपाईंहरुले पूरा शक्ति दिनुभयो । तर, दिदीले के दिइन् ? पर्चापट्टा दिइन् ? चिया बगानमा मजदुरी दिइन् ? प्रवासीहरुलाई फरेन राइट्स एक्ट लागू गरिन् ? पहाडका विद्यार्थीलाई सुविधा दिइन् ? अहँ, दिदीले केवल अभाव र भेदभाव दिइन् ।’
उनले थपे, ‘लकडाउनका समय केन्द्र सरकारले निशूल्क चामल र चना पठाएको थियो, त्यसलाई पनि त्रिणमूलका तौलावाजले लुटे । मैले पठाएको चामल पठाएँ, त्यो तपाईंलाई राम्रो लागेको थियो कि थिएन ?
त्यसमा पनि दिदीले गरिब, दलित, आदिवासी, पिछडावर्ग कसैलाई पनि उनीहरुको जायज हक दिइनन् । दिदीले घरमा ढल दिइनन् । खेतमा सिचाइको पानी दिइनन् । तर, यहाँका नदिलाई माफियाको हवाला गरिदिइन् ।’